Igwe igwe anaghị agba nchara mmiri trolley
Igwe igwe anaghị agba nchara ebe a na-egwu mmiri F-30 Size: 290mm (D) * 420mm (H) isi ọrụ: 1. Ihe eji arụ ọrụ nke igwe anaghị agba nchara; 2. okpu eji dia.100mm ihe ngbanye akwa 3. Enwere ike gbanwee akwa nke roba n'ime igwe anaghị agba nchara n’elu arịrịọ pụrụ iche. Biko cheta ịkpọtụrụ anyị maka ọnụahịa maka mgbanwe a.
igwe anaghị agba nchara IV mkpanaka maka M-4
igwe anaghị agba nchara IV mkpanaka maka M-4 isi: 1. igwe anaghị agba nchara telescopic 2. elu ya na nko 4
Nkwụ ọtọ IV (ụdị C)
Nkwụpụta IV (ụdị C) isi: 1. Igwe anaghị agba nchara gburugburu tube ABS plastic; 2. enwere ike idozi elu site na 135cm ruo 240cm; 3. elu ya na nkịrịkụ chrome 4, ABS plastik ABS nwere castors
Nnukwu oche F-44-2
Ihu: L1900 * W530 * H240 / 400mm isi: 1. epoxy mkpuchi steel, akwa nkwado dị elu nwere mkpuchi akpụkpọ anụ keakpọ 2. base with castors 3. Enwere ike iji ngwaahịa a dị ka oche na akwa